उफ ! सडक जाम ८ किलोमिटर पार गर्न २ घण्टा – Rajdhani Daily
उफ ! सडक जाम ८ किलोमिटर पार गर्न २ घण्टा
काठमाडौं । डल्लुबाट पुल्चोकस्थित कार्यालय जान बिहान ९ बजे बस चढेका विवेक रेग्मीलाई १० बजे कार्यालय पुग्न धौधौ पर्छ । कहिलेकाहीँ डेढ घण्टासम्मको समय लाग्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘जामले तीन किलोमिटरको दूरीमा रहेको कार्यालय पुग्न पनि डेढ घण्टासम्म लाग्छ,’ रेग्मीले भने । यसबीचमा टेकु, त्रिपुरेश्वर र थापाथलीको जामले यो रुट भई यात्रा गर्ने यात्रु सधंै सास्तीमा पर्ने गरेका छन् ।
सोह्रखुट्टेदेखि पेप्सिकोला कार्यालय आउजाउ गर्ने प्रकृति अधिकारीलाई पनि सधंै जामको समस्याले पिरोल्छ । झन्डै आठ किलोमिटर सडक पार गर्न उनलाई दुई घण्टा बढी समय लाग्छ । यस क्रममा सोह्रखुट्टे, लैनचौर, केशरमहल, जमल, सिंहदरबार, माइतीघर, बानेश्वर, कोटेश्वरलगायतका स्थानमा हुने जाम छिचोलेर कार्यालय पुग्नु उनको दैनिकी बनेको छ ।
‘दैनिक चार घन्टा बढी समय सडकका लागि छुट्याउनुर्छ,’ उनले भनिन् । यस क्रममा कोचाकोच सवारीमा धुलोधुवाँले भरिपूर्ण सडकमा भोग्नुपर्ने सास्ती पनि उस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा धेरैजसो यात्रुले दैनिकजसो बिहान ९ देखि ११ र दिउँसो ३ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्मको समयमा यस्तै जामको सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था छ ।
महानगरीय ट्राफिक महाशाखा यो समयमा धेरै सवारीसाधन एकसाथ सडकमा निस्कने हुँदा जामको समस्या आउने गरेको बताउँछ । स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा उपत्यकाको कोटेश्वर, चावहिल, जमल, सोह्रखुट्टे, गौशाला, माइतीघर, थापाथली, टेकु, कलंकीलगायतका स्थानमा अत्यधिक जाम हुने गरेको पाइएको छ । उपत्यकाका अधिकांश सडकमा ट्राफिक लाइट नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा उस्तै समस्या परेको देखिन्छ ।
दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको जनसंख्या तथा सवारी चाप, सवारी व्यवस्थापनमा प्रविधिको अभाव, सीमित साँघुरा सडक, सवारी नियम तथा ट्राफिक संकेतसम्बन्धी सडक प्रयोगकर्तामा रहेको ज्ञानको कमीले जामको समस्या उत्पन्न भएको महाशाखाको बुझाइ छ ।
– अनावश्यक शाखा सडक
– अकासे पुल र अन्डरग्राउन्ड बाटो नहुनु
– उपत्यकामा बढ्दो सवारी चाप
– वैकल्पिक सडक अभाव
– प्रविधिमैत्री सडक नहुनु
बढी जाम हुने स्थान
‘बिहान ९ देखि ११ र बेलुका ४ देखि ७ बजेसम्म धेरै सवारीसाधन सडकमा निस्कने हुँदा समस्या आउने गरेको छ,’ महाशाखाका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रविकुमार पौडेलले भने । उपत्यकामा जामको मात्रा वृद्धि नभएको उनको दाबी छ । जाम नबढे पनि नियन्त्रणमा भने कठिनाइ रहेको उनको भनाइ छ ।
सडक विभागले भने उपत्यकाको जाम हटाउन विभिन्न योजनामा काम भइरहेको बताएको छ । विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले कलंकी अन्डरपास सञ्चालनमा आएको र यसबाट कलंकी क्षेत्रमा हुने जाम कम भएको बताए । त्यस्तै, पछिल्लो समय अत्यधिक जामको समस्या भोगिरहेको कोटेश्वर क्षेत्रको जाम हटाउन जडीबुटीबाट बालकुमारीतर्फ बेलिब्रिज सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘ट्राफिक लाइटका सम्बन्धमा पनि ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी मर्मत र थप गर्ने क्रममा छौं,’ सापकोटाले भने । उपत्यकाको सहरी विकासको अनुपातमा सडक विस्तार र सडक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नु, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा अस्वस्थ एवं अवैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा रहेकाले सवारी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।
यातायात क्षेत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बन्न नसक्दा यस्तो समस्या रहेको विज्ञको भनाइ छ । उनीहरू तत्काल योजना बनाएर उपत्यकामा जामको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
Tags: ८ किलोमिटर पार गर्न २ घण्टा